အသားအရေ ဝင်းလက်တောက်ပစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ - Hello Sayarwon
အသားအရေ ဝင်းလက်တောက်ပစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
နေရောင်ခြည်နှင့် အချိန်ကြာကြာ ထိတွေ့ရမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာ၊ အရေပြားခြောက်သွေ့မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ လူနေမှုပုံစံရွေးချယ်မှု၊ ဓါတုပစ္စည်းများ အဓိကပါဝင်တဲ့ အလှကုန်များကို ကြာရှည်စွာသုံးစွဲမှု စတဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးက အသားအရေကို ညိုမဲပြီးမွဲခြောက်စေပါတယ်။
လူအတော်များများဟာ ဖြူဝင်းပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ အသားအရေမျိုး ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ စိတ်ပါလက်ပါ ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသလို ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေတဲ့ ခရင်မ်နဲ့ လိုးရှင်းတွေ မှိုလိုပေါက်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရသလောက် သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် သဘာဝကရရှိတဲ့ ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အချိန်ကုန် ငွေကုန် သက်သာတဲ့အပြင် သင့်အသားအရည် အမှန်တကယ် ဖြူဝင်းလှပလာတာကို လက်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်မှာ အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အာဟာရဓါတ်များစွာနဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ်လို့ ခေါ်တဲ့ အရောင်ချွတ်အာနိသင်ရှိတဲ့ အပျော့စားအက်ဆစ်တစ်မျိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ဟာ အသားအရေအမျိုးအစား အားလုံးအတွက် အသုံးပြုဖို့သင့်တော်တဲ့ သဘာဝထွက်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သခွားသီးဟာ သင့်အရေပြားပေါ်က မလိုလားအပ်တဲ့ အသွေးအရောင်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင် မိမိအိမ်မှာပဲ အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ အစွမ်းထက် သဘာဝထွက်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေထိန်းသိမ်းရာမှာ အဓိကကျတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ ဗီတာမင် စီ ဖြစ်ပါတယ်။ လိမ္မော်သီးမှာ ၎င်း ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး အရောင်ချွတ်အာနိသင်လည်း ရှိတဲ့အတွက် သင့်ကို အသားဖြူလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့ လိမ္မော်ဖျော်ရည်ကို ပုံမှန်သောက်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေ ချောမွေ့စိုပြေလာနိုင်သလို သဘာဝလိမ္မော်ရည် ဒါမှမဟုတ် လိမ္မော်ခွံကို အရေပြားပေါ် ပွတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အသားဖြူဝင်းလာနိုင်တယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။
ဂျုံမှုန့်ဟာ အသားအရေ ဖြူဝင်းလိုသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝထွက်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်မှာ သင့်အသားအရေကို ကျန်းမာစေတဲ့ အာဟာရဓါတ် များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ၎င်းကို တစ်ရက်ခြား အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အဆီပြန်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေသလို အသားအရေရဲ့ သဘာဝအစိုဓါတ်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ပျားရည်မှာ အရောင်ချွတ်နိုင်တဲ့ အာနိသင်နဲ့ အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းဟာ အသားအရောင် မညီမညာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အလျောက် ပျားရည်အသုံးပြုခြင်းက ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပျားရည်ရဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ အစက်အပျောက်တွေနဲ့ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
သင့်အရေပြားကို နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့အောင် အပြင်ထွက်တိုင်း နေရောင်ကာလိမ်းဆေးလိမ်းသင့်ပါတယ်။ SPF ၂၀ အထက်ပါဝင်တဲ့ moisturizer နဲ့ အခြားအလှကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အသားအရေဖြူဝင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရောင်ခြည်မှာ ခန္ဓါကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် ဒီ အဓိကပါဝင်နေတဲ့အတွက် သင်အသားအရေဖြူဝင်းလိုတဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ချိန်ဆပြီး နေရောင်ခြည်နဲ့ မျှတစွာထိတွေ့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သံပုရာသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ်ဟာ သဘာဝအရောင်ချွတ်ဆေးတစ်ခုသဖွယ် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းမှာ ဆဲလ်အသစ်များ ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးတဲ့ ဗီတာမင်စီနဲ့ အသားအရေအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
နွယ်ချိုမြစ်ဟာ နှင်းခူရောဂါ အစရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အရေပြားရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ အစွမ်းထက်တဲ့ ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ နွယ်ချိုဟာ ခန္ဓါကိုယ်က မယ်လနင် ခေါ် ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုး ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး အရေပြားဆဲလ်များကို ညီညွတ်မျှတစေတဲ့အတွက် အသားဖြူစေပြီး အမည်းစက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။
ဂျာမန်စိန်ခြယ်ပန်းခြောက် စားပွဲဇွန်း ၃ဇွန်းကို ပွက်ပွက်ဆူနေသည့် ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်ကြာစိမ်ထားပါ။ ထို့နောက် ပန်းခြောက်များကို သေချာစွာဆယ်ယူပြီး ကျန်ရှိသည့်ပျော်ရည်ထဲ နှင်းဆီရည်နှင့် ပျားရည် စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်းဆီ ရောပါ။ ရရှိလာသည်များကို အရေပြားပေါ် လိမ်းပေးပြီး မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာလျှင် ရေနှင့်ဆေးကြောပါ။ ဆေးရည်လက်ကျန်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းထားပြီး ထပ်မံအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသီးကို အလှအပရေးရာ ကုထုံးအမျိုးမျိုးုမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသလို အသားဖြူစေဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သင်္ဘောသီးမှာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းတောက်ပကျန်းမာစေတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းများစွာ ပါဝင်တယ်လို့ အများက ယုံကြည်လက်ခံထားပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အသားအရေကို ကျန်းမာလှပစေတဲ့ ဗီတာမင် စီ ပါဝင်တဲ့အပြင် အရောင်ချွတ်အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက် ညိုမဲတဲ့အသားအရေကို သဘာဝဆန်ဆန် ဖြူဝင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာပါဝင်တဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ်ကြောင့် အရေပြားရဲ့ pH ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သလို အသားအရေညိုမဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဓါတ်တိုးပစ္စည်းများကို ဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိလည်း ရှိပါတယ်။
ကြက်ဥအကာကတော့ အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေပြီး အရေပြားပေါ်က အမည်းစက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ရှားဇောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်ဟာ အသားအရောင် မညီမညာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အရေပြားညိုမဲခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး သင့်နဂိုမူလအသားအရောင်ကို ပြန်လည်ရရှိစေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၎င်းရဲ့အအေးဓါတ်က ဆဲလ်အသစ်များ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ တစ်ရှူးများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှာ အကူအညီပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေကို ကျန်းမာလှပစေပါတယ်။
ရှားဇောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို အသုံးပြုခြင်းက အရေပြားပေါ်က အမည်းစက်များကို ပျောက်ကင်းစေပြီး သင့်အသားအရေကို လှပကောင်းမွန်စေမှာ အသေအချာပါပဲ။
အသားအရောင်ညိုမဲစေတဲ့ အဓိကတရားခံက မယ်လနင်ဖြစ်ပြီး မယ်လနင်ထုတ်လုပ်ရာမှာ အရေးအပါဆုံးအင်ဇိုင်းကတော့ Tyrosinase ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲယိုသီးမှာ Tyrosinase ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို တားဆီနိုင်တဲ့ flavonoids များ ပါဝင်ပါတယ်။ ရဲယိုသီးဟာ ညိုမဲနေတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေမှာဖြစ်ပြီး အသားအရောင်ကိုလည်း နဂိုထက် ပိုမိုဖြူဝင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို အရေပြားပေါ် နေ့စဉ်လိမ်းပေးရင် ဖြစ်စေ၊ အခြားဆေးဝါးများနဲ့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရင်ဖြစ်စေ ထူးခြားတဲ့အကျိုးရလဒ်များကို လက်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နို့ဟာ အကောင်းမွန်ဆုံး သဘာ၀ သန့်စင်ဆေးရည်တစ်ခုပါပဲ။ နို့မှာပါဝင်တဲ့ Lipase အင်ဇိုင်းဟာ အဆီမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး Protease ကတော့ ပရိုတိန်းအခြေခံ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ နို့ကို သန့်စင်ဆေးရည်အဖြစ် ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အသားအရေ ပိုမိုချောမွေ့တောက်ပလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နို့ကို ဘယ်အသားအရေအမျိုးအစားအတွက်မဆို အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက မွေးညင်းပေါက်တွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ဖုန်၊ အညစ်အကြေးနဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ အရေပြားရဲ့ pH ကို ထိန်းညှိပေးပြီး အမည်းစက်တွေကို ဖြူလာစေတဲ့ အာနိသင်လည်း ရှိပါတယ်။
အုန်းဆီဟာ အစားအစာချက်ပြုတ်ရာမှာ အသုံးဝင်ရုံသာမက အခြားကောင်းကျိုးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့နောက် အုန်းဆီစွတ်ထားတဲ့ ဂွမ်းလုံးတစ်လုံးကို အရေပြားအနှံ့ ပွတ်ပေးပြီး ရေမဆေးဘဲထားပေးရုံနဲ့ သင့်အသားအရေကို ဖြူဝင်းလှပစေနိုင်ပါတယ်။ မိမိအိမ်မှာပဲ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းဖို့ ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်း အုန်းဆီကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သကြားမှာ အရေပြားဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အရေပြားအလွှာသစ်ကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါသလို နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သကြားဟာ collagen ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုတို့ကိုလည်း အားကောင်းစေပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ scrub လုပ်ရာမှာ သကြားအညိုကိုဖြစ်စေ သကြားအဖြူကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
20 DIY Home Remedies For Skin Whitening. http://homeremediesforlife.com/skin-lightening/.
How to Lighten Skin Naturally. http://www.top10homeremedies.com/how-to/lighten-skin-naturally.html.
How to Lighten Skin, Fast, Overnight, Naturally, Permanently, Home Remedies. http://www.lightskincure.org/skin-lightening/how-to-lighten-skin-fast-overnight-naturally-permanently-home-remedies/.
How to Lighten Skin Naturally Fast, Overnight, Permanently with Home Remedies, Milk, Baking Soda and Lemon Juice. http://www.treatcurefast.com/skin/skin-whitening/how-to-lighten-skin-fast-overnight-naturally-permanently-at-home-whiten-dark-skin/.